bishnu bashyal(bishnu bashyal) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
विष्णु बस्यालको प्रक्षेपण-'डिसेम्बर पहिलो साताभित्रै नेप्सेले १९५० विन्दू चुम्छ'
काठमाण्डौ । बुधबार नेप्से परिसूचक अलटाइम हाईको नजिकै पुगेको छ । बजारले भोलि अल टाइम हाईको विन्दू ब्रेक गर्ने तयारी गरिरहँदा अब नेप्से परिसूचक कहाँ पुग्छ भन्ने लगानीकर्तामा कौतुहुलता देखिएको छ । बुधबारकै कारोबारमा पनि लगानीकर्ताहरुले तीव्र रुपमा सेयरहरु खरीद गरिरहेका छन् । बजारमा सक्रिय रहेका भोका लगानीकर्ताहरुले बढाएको अधिक खरीद...
नेप्सेमा १६६८ को प्रतिरोध, ब्रेक भए चाँडै १७५० को उचाई चुम्ने विष्णु बस्यालको प्रक्षेपण
काठमाण्डौ । यो हप्ताभरि नै नेप्से परिसूचकमा झिनो अंकले मात्र उत्तारचढाव देखियो । लगानीकर्ताहरुको बलियो मनोबल र चौतर्फी माहौल सकारात्मक भइरहेका टिप्पणीहरु आइरहँदा अब बजारले कस्तो दिशा तय गर्ला? सेयर बजार प्राविधिक विश्लेषक विष्णुप्रसाद बस्यालले समग्रमा ट्रेण्ड १५४५ विन्दू बाट फर्केर १२० अंक जोडिएको उल्लेख गर्र्दै ३०–४० अंकको...
विष्णु बस्यालको प्रक्षेपण-'आगामी सातापछि बुलिस ट्रेण्ड सुरु, नेप्से १८०० नपुग्दासम्म थामिन्न'
काठमाण्डौ । धितोपत्र बजार मापक नेप्से परिसूचक यो साता स्थिरप्रायः रह्यो । परिसूचक १५५० को विन्दू वरिपरि नै घुमिरहेको बजारमा दैनिकजसो झिनो अंक र दैनिक कारोबार रकमसमेत २ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चियो । बजारको यो सुस्तताले धेरै लगानीकर्ताहरुमा द्विविधा हुनसक्छ । बजारको विश्लेषण तथा भविष्यलाई लिएर कतिपय अवस्थामा प्रक्षेपण विज्ञहरुबाट...
नेप्से १४१५ विन्दूबाट माथि उक्लिए एक महिनामै १६०० को विन्दू चुम्ने प्रक्षेपण
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय सेयर बजारमा रौनक छाएको छ । बढ्दो अनलाइन कारोबारीको संख्या र नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेशले सेयर बजार गुल्जार बन्दै गएको देखिन्छ । हिजो आइतबार बजारमा भारी अंकले गिरावट आयो । लगानीकर्तामा एक किसिमको सन्त्राससमेत छायो । अब बजार के हुन्छ ? यो प्रश्न आम लगानीकर्ताहरुमा मनमा खुल्दुली भइरहेको विषय पनि हो । अधिकांश...